SSM : Miketrika fanakorontanana -
AccueilSongandinaSSM : Miketrika fanakorontanana
SSM : Miketrika fanakorontanana
06/01/2018 admintriatra Songandina 0
« Tsy maty voalavo an-kibo ». Nindramina kely io fomba fiteny io mba hoenti-manambara ny fombafomban’ny Solidarité Syndicale de Madagascar , na ny SSM (Firaisamben’ny sendikà) amin’izao fotoana izao.
Raha toa ka nikononkonona fanakorontanana izy ireo tamin’ny faramparan’ny taona 2017 tamin’ny nisian’ny karaman’ireo mpiasam-panjakana tapaka, izay efa voaloa nialoha sy taoriana kelin’ny fetin’ny faran’ny taona sy ny voalohan’ny taona, niverina nivory indray ireo lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ity SSM ity omaly, tetsy Mahamasina.
Raha ny vaovao voaray, dia nivoitra nandritra ny fivorian’izy ireo tamin’izany ny fampitahorana ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny fitokonana faobe. “…raha toa ka mbola miverina ny toa ireny fanapahana ny karaman’ny mpiasam-panjakana ireny, hanatanteraka fitonkonana faobe ny SSM…”
Raha io voalazan’ny SSM io, dia midika izany fa fikononkononana fanakorontanana eto amin’ny firenena. Tsiahivina anefa fa efa nisy ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny baikon’ny Filoham-pirenena amin’ny tsy maintsy namerenana izany karaman’ny mpiasam-panjakana izany tamin’ny laoniny. Noho izay indrindra, dia tsy takona afenina fa misy ambadika politika ity ataon’ny SSM ity. Izany hoe, misy mampirisika any ambadika any izy ireo hanatanteraka fitokonana faobe izay hoentina hanakorontanana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Eny, na efa namerina izany amin’ny laoniny tamin’ireo mpiasam-panjakana tsy nahazo karama tamin’ny daty voatondro aza ny Fitondrana.
Voaporofo, araka izany, fa misy ambadika politika ny nampihetsika ny SSM satria rehefa zohina lalina, dia tsy tena avy amin’izy ireo loatra ny hanatanteraka hetsika fanakorontanana. Hita taratra izany tamin’ny fikasana hitarika ny mpiasam-panjakana hikomy teo aloha, izay tsy nahazoan’izy ireo olona akory. Mivaha ny olana ankehitriny, mbola mitohy ihany anefa ny fikononkononana ataon’izy ireo any ambadika rehetra any.
Raha ny tsilian-tsofina indray mantsy, ny mahakasika ireo mpiasam-panjakana “matoatoa” izay voaroaka indray no hamoronan’izy ireo antsonjay hoenti-manatanteraka ilay tanjona amin’ny fanakorontanana. Mazava anefa ny nambaran’ny praiminisitra, Solonandrasana Mahafaly Olivier, fa tsy maintsy diovina ny eo anivon’ny mpiasam-panjakana, izay tsy maintsy hanesorana, avy hatrany, ireo mpiasam-panjakana “matoatoa” ireo satria volam-bahoaka no handoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana. Rariny loatra raha toa ka nandray fepetra hentitra ny fitondram-panjakana mahakasika izany.
Etsy andaniny, dia efa nampitandrina ihany koa anefa ny fitondrana tamin’ny alalan’ny mpitondra tenin’ny governemanta, Harry Laurent Rahajason, fa tsy hilefitra amina fanakorontanana izy ireo, ary tsy maintsy handray fepetra hentitra mahakasika izany raha toa mbola misy minia manakorontana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka.
Click the next post dans « RAMILY TEODORIN ! »
Anonyme dans Fivoriamben’ny firenena mikambana: NISOKATRA HO AN’I MADAGASIKARA NY VARAVARANA
Solombavambahoaka niatrika ny PM : Ny tombontsoa manokana hahalany azy ireo aloha
Fokontany 192 : Tsy manaiky ny fanaovana an’Antananarivo ho sorona
Tanora malagasy : Leo « putschiste »
Tafika Malagasy : “Tsy manaiky Tetezamita vaovao”
Earnest Brumbalow: I’ve read several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to…
www.pcmadd.Com: Hey there would you mind stating which blog platform you're working with? I'm planning to start my own…